नेपालमा हिपाटाइटिस सी को उपचार
बाह्रखरी - मंगलबार, असार २१, २०७३
प्राध्यापक डा. सुधांशु केसी
सन १९९६ तिरको कुरा हो, वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा एक जना बिरामी आएका छन् हेरिदिन पर्‍यो भनेर कल आयो । दौडिएर हेर्न पुग्दा ३० वर्षका युवक रहेछन् र ल्याउनुको कारण उनको झ्यालबाट हाम्फाल्ने कोसीस रहेछ । उनलाई त्यसो गर्न नदिएपछि एकदम छट्पटाएकाले अस्पताल ल्याइएको रहेछ । देख्नेबित्तिकै चिनी हाले – उनी हाम्रा पुरानो बिरामी रहेछन् । उनको हिपाटाइटिस सीको उपचार भर्खरैमात्र सुरु गरिएको थियो । जे भएको थियो त्यो उनको मानसीक रोग थिएन । त्यसको कारण त त्यसबेला हिपाटाइटिस सीको उपचारका लागि उपलब्ध एउटामात्र औषधि इन्टर्फेरोन थियो । बिरामीलाई केही दिन भर्ना गरेर सामान्य अवस्थामा फर्केपछि डिस्चार्ज गरेर पठाइयो । महँगो उपचार, धेरै साइड इफेक्ट भएका कारण त्यति बेला हिपाटाइटिस सीको उपचार गर्ने भन्दा नगर्ने धेरै हुन्थे ।
सन् १९९८ मा राइबाभेरिन भन्ने औषधि पत्ता लागेपछि हिपाटाइटिस सी को उपचारमा अर्को फड्को मारेको हो । दुई औषधिको प्रयोगपछि ५० प्रतिशतसम्म सफल उपचार भएको देखियो । तर, साइडइफेक्ट भने घटेको पाइएन । नेपालमा यी दुई औषधि प्रयोग गरेर उपचार भयो भएन त्यसको तथ्यांक उपलब्ध हुनसकेको छैन । सन् २००१ पछि पेगाइलेटेड इन्टर्फेरोनको आविष्कर सँगै हिपाटाइटिस सीको उपचारमा नयाँ आयाम थपियो । साताको ३ इन्जेक्सनबाट १ इन्जेक्सनको मात्रा र साइडइफेक्ट पनि निकै कम भएको कारणले गर्दा उपचार गर्ने पनि धेरै हुनुको साथै सफल उपचारको संख्या पनि थपिन थाल्यो ।
सन् २००१ देखि सन् २००४ भित्र नेपालमा हिपाटाइटिस सीको उपचार कति भए त्यसको तथ्यांक पनि भेट्टाउन सकिएन । सन् २००४ देखि मैले हिपाटाइटिस सीको उपचार विधिवत् सुरु गरेको हुँ । पहिलो बिरामी मेरै भतिजाबाट सुरु गरेपछि आजसम्म निरन्तर रहिआएको छ । पेगासिस (पेगाइलेटेड इन्टर्फेरोन) र रिबाभेरिनको प्रयोग गरेर करिब सात सय जनाको उपचार गर्दा छ सय ३० जनाभन्दा बढीको सफल उपचार गर्न सकियो । उपचार सफल नहुनेहरूमा लिभर सिरोसिस भइसकेका बिरामी, उपचार क्रममा पनि रक्सी, चुरोट सेवन गर्ने र जेनोटाइप १ का बिरामी थिए । उपचार उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि धेरै जना उपचार गर्न नआउने कारण भने यसको साइड इफेक्ट नै थियो । तर जति हो त्यसभन्दा बढी सुनिने र नेटमा हेरेर तर्सिनेको संख्या धेरै भएकोले उपचारमा कमी आएको हुनुपर्छ ।
हिपाटाइटिस सीको उपचार गर्दैमा निको नहुने र उपचारपछि पनि फर्किन सक्ने भएकोले यसको उपचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुबिधा धेरैमा पाइन्छ । तर, अचेल प्रयोग हुने औषधिका साइड इफेक्ट एकदमै कम, प्रयोग गर्न सजिलो, निको हुने सम्भावना धेरै भएकाले हिपाटाइटिस सीको उपचार गर्न आउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदैआएको छ । बाह्र वर्षको अन्तरालमा करिब ९ सय जनाको उपचार गरेको अनुभव मसँग छ । मेरो अनुभव र अन्य साथीको उपचार तथा शोध हेर्ने हो भने नेपालमा हिपाटाइटिस सी को ६ जेनोटाइपमध्य ६० प्रतिशत जति जेनोटाइप ३ र ४० प्रतिशत जेनोटाइप १ पाइएको छ । अनेक उतार चढावपछि अहिले आएर हिपाटाइटिस सीको उपचार एकदमै सजिलो भएको छ र उपचारपछि निको हुनेको संख्या धेरै छ । जुनबेला इन्टर्फेरोन प्रयोग गरेर उपचार गरिन्थ्यो त्यसबेला जेनोटाइप १ का बिरामी उपचार गर्न गाह्रो थियो । किनभने यसको उपचार ४८ साता गर्नुपर्थ्यो र उपचार गरेर निको हुने सम्भावना ६०-८० प्रतिशतमात्र थियो र उपचार गरेपछि फर्केर आउने पनि सम्भावना हुन्थ्यो । अब आएर खानेमात्र औषधि (डिएए = डाइरेक्ट एक्टिङ एन्टिभाइरल) प्रयोगपछि जेनोटाइप १ सजिलोसँग निको गर्न सकिने भएको छ । विदेशमा जेनोटाइप ३ निको हुन गाह्रो भनिए पनि हाम्रो देशमा यो जेनोटाइपको पनि उत्तिकै सफल उपचार भइरहेको छ ।
सन् य१९९० देखि नियमित जाँच हुनथालेको यो भाइरसको उपचार २५ वर्षमा निकै फड्को मारिसकेको छ । अहिले उपलब्ध भएका औषधिको प्रयोग ठीकसँग गर्न सक्ने हो भने यसलाई अर्को १५-२० वर्षमा निर्मूल गर्नसकिने अवस्था छ । अझै पनि यसको उपचार खर्च महँगो हुनाले विश्वबाट यसलाई उन्मूलन गर्न समय भने लाग्ला नै । नेपालमा हिपाटाइटिस सी संक्रमित व्यक्ति यति नै छन् भन्ने तथ्यांक नभए पनि हाललाई करिब १ लाख १५ हजार संक्रमित व्यक्ति छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । लागु पदार्थ दुर्व्यसन प्रमुख कारण भएको यस रोग सर्ने अरू कारणमा नजाँचेका रगत चढाउनु, ठीकसँग प्रशोधन नगरेका यन्त्र चलाऊनु र शारीरिक संपर्कलगायत पर्छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले मार्च २०१५ देखि नयाँ औषधि सोफोसोबुभिर चलाउन अनुमति दिएपछि नेपालमा हिपाटाइटिस सीको उपचारमा नयाँ आयाम थपियो । तत्पश्चात् आधाभन्दा बढी बिरामीमा इन्टर्फेरोन इन्जेक्सन लगाउन पर्ने बाध्यता सकियो । उपचार सजिलो र साइड इफेक्टरहित हुन थाल्यो । एक वर्षमा करिब १०० जना जेनोटाइप ३ का बिरामीको उपचार गर्दा ९० भन्दा बढी बिरामी निको भएको पाइएको छ । निको नहुनेमा अधिकांश लिभर सिरोसिसका बिरामी पर्छन् । खुसीको कुरा के थियो भने यो औषधि भारतमा बने पनि त्यहाँभन्दा पहिला नेपालमा उपलब्ध हुन थालेको थियो । नेपालमा उपलब्ध भएको नेटमार्फत् थाहा भएर एकै महिनामा भारतबाट ५०० को हाराहारीमा उपचार गर्न बिरामी आएका थिए । भारतमात्र हैन चीन र अन्य युरोपेली मुलुकबाट पनि बिरामी आउन थाले र यो क्रम जारी छ । पैंसठ्ठी वर्षको उमेरमा यस
रोगको सफल उपचार हुँदा एक जना अमेरिकी महिलामा देखेको मुस्कान बिर्सिन गाह्रो हुनेछ ।
हिपाटाइटिस सीको उपचारमा अर्को फड्को मारेको मिति हो सेप्टेम्बर २०१५ । यस महिनादेखि नेपालमा सोफोस्बुभिर र लेडिपास्भिर एउटैमा भएको औषधि भित्रियो । यो औषधि आएसँगै नेपालमा इन्टर्फेरोन प्रयोग बन्द भयो र जेनोटाइप १ का बिरामीले १२ सातामात्रै औषधि खाएर निको हुने अवस्था आयो । सन् २००४ सालमा २० लाख खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने रोगको २०१५ मा १ लाख १० हजारमा उपचार हुने भयो । ९ महिनाको अन्तरालमा ४५ जनाको उपचार गर्दा ४३ जना निको भइसकेका छन् । विकसित मुलुकलाई पछ्याउदै जनवरी २०१६ देखि नेपालमा अर्को औषधि डाक्लाटास्भिर भित्र्याउन सफल भइयो । यसको आगमनपछि ६ महिना उपचार गर्नुपर्ने जेनोटाइप ३ लाई ३ महिनामै उपचार गर्न मिल्ने भयो । समयको साथै पैसाको पनि बचत हुनेभयो । यसको प्रयोगपछि उपचार गरिएका बिरामी शतप्रतिशत निको भएका छन् । बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि अररू निर्क्योल निकल्न सकिन्छ ।
यही गतिमा उपचार गर्न सकिने हो भने निकट भविष्यमै नेपालबाट हिपाटाइटिस सी निर्मूल हुनसक्छ । नेपाल सरकारले ध्यान दिने हो भने सन् २०३० भित्र नेपालबाट यो रोग निर्मूल गरेर विश्वमै उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ । तर महँगो उपचारमा ध्यान दिनुभन्दा पनि यो रोग सर्न नदिने उपाय गर्दा बढी सस्तो र भरपर्दो हुन्छ । लागु पदार्थ दुव्यसन प्रमुख कारण भएकोले त्यसको नियन्त्रणतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । भर्खरै नेपालमा हिपाटाइटिस सी को उपचार गाइडलाइन निकालिएको छ । तर यो गाइडलाइनमा धेरै त्रुटि देखिएको हुनाले यसले हिपाटाइटिस सी को उपचारमा नयाँ कुनै प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिन्न । विज्ञहरूको उचित सल्लाह र सुझावविना बनाइएजस्तो लाग्ने यो गाइडलाइन उपयुक्त प्रक्रिया पूरा गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डा. केसी कलेजो रोग विशेषज्ञ हुन् ।
मंगलबार, असार २१, २०७३ मा प्रकाशित